Ziziphi I Stores Best Vintage EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Ziziphi I Stores Best Vintage EYurophu
Xa ufuna kwiivenkile best iidiliya eYurophu, awunguye kuphela ndikhangele kwezo zahlulo engaphelelwa. ukuba Nawe bathathe uhambo ngendledlana memory phantsi nembali uhlola. A Ivenkile kweediliya lifana ngendlela encamisayo museum, kubonisa inkcubeko isixeko kunye nembali. uthando uhlola izixeko emitsha nenika umdla ngololiwe, yaye ukufumana unique nempahla akuphelelwa yenye indlela fun yokwenza oko. Nazi ke Best kwiivenkile Vintage eYurophu nendlela apho yi Train.
Best kwiivenkile Vintage eYurophu Paris: Free P Star
Njengoko elikomkhulu kakhulu watyelela yesibini ka-Europe, Paris idityanisiwe kakuhle kakhulu kwaye zifikeleleke. Abahambi bangangena Paris ngokulula ngololiwe evela kumazwe amaninzi angabamelwane afana Bheljiyam, Speyin, Holland, UK, Jemani , phakathi kwabanye usebenzisa SaveATrain.
Wakuba owehla off uloliwe, stop yethu yokuqala uya kuba Simahla P Star. ukuba, njengathi, ungumntu othanda izinto zonke Retro, ngoko akukho Jaunt kwinkunzi fashion of Europe iya kuba ngokupheleleyo ngaphandle siwumise umbhodamo emangalisayo Free P Star. Ngokungafaniyo nezinye iivenkile iidiliya eParis, FREE'P'STAR ayithethi nje ukuthengisa French iimpahla yesibini-ngesandla. Bazithengise iimpahla yesibini-isandla esuka eUnited States kakhulu kwaye ngamanye amaxesha indalo amatsha eyenziwe iingubo ezindala. Kukho iindidi enkulu impahla kweediliya kakhulu inokhuphiswano ngexabiso kunye izincedisi evela 70s’ ekunene ukuya kwinkulungwane yama-21.
Egcwele nge enemingxuma ubuncwane kweediliya amadoda kunye nabafazi, kwisitora is ultimate uye-to for namagqala abathengi yesibini-ngesandla abakulungeleyo usemba nzulu ukuze afumane uyafumana zawo nendlela.
I-Dijon ukuya kwitikiti lesitimela laseParis
Ukubuyela kwitikiti lesitimela laseParis
I-Lille ukuya kwitikiti lesitimela laseParis
Ukhenketho lokuya kwitikiti laseParis
Best kwiivenkile Vintage eBerlin: Cula Blackbird
Unga ukufikelela eBerlin kuzo zonke iindlela ngokusebenzisa InterCityExpress fast, amabanga, EuroCity, kunye Uqeqesha InterRegio. Isikhululo entsha engundoqo Berlin Hauptbahnhof entliziyweni Berlin yavulwa 2006 kunye ingqiqo entsha bakwaloliwe nezikhululo e Berlin yayifakwe. bonke kwizikhululo zikaloliwe oxhulumene kakuhle inkqubo yothutho loluntu, ukuze ngokwenza indlela yakho kukho super lula, kwaye zibe nokufumaneka ukuba usebenzisa Gcina Uloliwe kunjalo.
Nangona Paris isenokuba yenye yeendawo ezininzi watyelela eYurophu, sicinga Berlin likhaya ezinye indlela esitratweni swankiest eYurophu. Yinto Akumangalisi ke, ukuba Berlin ukuba nemibuzo ezinye Best kwiivenkile Vintage eYurophu. Omnye weenceke bethu ukuba Cula Blackbird. Ifunyanwa kwisithili arty ka Neukolln indawo yesibini-isandla idibanisa ingqokelela yayo eclectic kweengubo kweediliya kunye cafe onceda abantu ukutya Vega. Siziva oku ulunika ekupheleni lokwenene sizathu ngakumbi ukuhlala shop, udle! It has a isanga lamaqhosha yokuluka evela 70s’ ukuya 90’ kwakunye ephatha ngesandla esimnandi, Cula Blackbird a winner bonke ozinikezele foodie!
IBremen ukuya kwitikiti lesitimela laseBerlin
I-Leipzig ukuya kwitikiti lesitimela laseBerlin
Ukuhamba ngeenyawo ukuya eBerlin
IHamburg ukuya eBerlin itikiti kaloliwe
Best kwiivenkile Vintage e Amsterdam: uziphu
Musa ukuqhathwa umbono wokuqala. Le venkile ibukeka amancinci ngaphandle, kodwa xa uthi uhambe amasango, uyakuthi amava ngomlingo ngoko nangoko. Uya kufumana enye kwiivenkile yesibini ngobukhulu-isandla Amsterdam ufake imigangatho ezimbini cavernous kuxinene ngokupheleleyo iimpahla kweediliya, ezahlulwe sisithuba kwinqanaba mezzanine ozinikezele ukuba izincedisi.
Ivenkile njalo restocks kwaye sigcina izinto ezintsha kunye ezintsha. Nangona ukukhethwa kwayo ihamba oyaluzisa-and-flow fashion wesimanje, uziphu uyazigcina komele yayo yafakwa ziluhlaza izinto ezifana ijini, jackets impi, nehehempe yeflaneli.
IBrussels ukuya eAmsterdam kwitikiti lesitimela
ILondon ukuya eAmsterdam itikiti lesitimela
I-Berlin ukuya e-Amsterdam itikiti lesitimela
I-Paris ukuya eAmsterdam itikiti lesitimela
Best kwiivenkile Vintage e Barcelona: kwaye Swing
Emi ngaphandle njengoko elikomkhulu benkcubeko nase-, Barcelona i avant-garde uzibone kodwa akuyo. Ukunikela izakhiwo mihla, izakhiwo ephakathi, cuisine creative, yaye buzzing nightlife. Barcelona yenye phezulu Iindawo ezinika umdla European. Yaye ekubeni uzongena Summer, ke ukuba baxakeke super. Ngoko qiniseka ukuba incwadi amatikiti etreyini yakho Ekuseni SaveATrain. Akukho kuphela Barcelona likhaya ezinye Best kwiivenkile Vintage eYurophu, kodwa ke kwakhona omnye Summer kakhulu ethandwa iholide oya kuyo. Phakathi ukutya okumnandi Tapas bed kwenye abaninzi esimhlophe, thatha ixesha ukutyelela kwaye Swing. Le Boutique gorgeous kweediliya ise kule ndawo ezithandwayo sizalelwe. Gcwala mpahla ngesandla-ekhethiweyo, iingxowa, ubucwebe neembadada, kulevenkile snazzy isitokhwe isinxibo iidiliya kuyo yonke leminyaka kwinkulungwane yama-20.
Ukuba okuphambili le nto yakho, ke wena uze endaweni ekunene. kwaye Swing iimpawu iziqwenga Retro evela Chanel, Yves Saint Laurent, no Christian Dior, okwenza ukuba indawo ogqibeleleyo athengayo xa ufuna ukuba bafake ethile kwako zibe lezambatho lakho kweli xesha lonyaka.
Geneva: Le Vet 'Shop
Geneva i imibulelo iphupha umzi isicwangciso elikhethekileyo nembono zobungangamela Mont-Blanc. Ephakeme kunazo eYurophu. the emaphandleni, indawo ephelele imisebenzi ongaphandle, imizuzu nje embalwa kude nomzi. Geneva is the best starting point to visit the rest of Swizalend ngenxa elihle uxhulumaniso izithuthi zikawonke ngololiwe.
Wena ucinga .... Nantso info nice nabo bonke, Baphi na ke iingubo kwi, intombazana?! ndiyazi, Geneva akufunekanga kwaziwa njenge isixeko uyonga, kodwa loo nto umelwe kukuba thina. Ukuze ahlukanise ubuncwane obufihliweyo kuba uthanda le. Kuba cash abahambi lexinene bakhangele phezulu umdlalo wabo iidiliya ngaphandle kokuba ukuthengisa umphefumlo wabo, Le Vet 'Shop e Geneva indlela phambili!
Icandelo le-Swiss Red Cross, ivenkile kuphelile ukuvuna oko fashion ngaphezulu ezijolise kunezixhobo yayo Charity ivenkile. It kuphela athengise impahla Retro isandla-wathatha ukusuka yemiyinge angumqondiso ezifana Givenchy and Celine. ke, ukuba ngaba umthandi fashion yesibini-ngesandla zesimilo, yezizathu zezopolitiko okanye yezoqoqosho, phuma Le Vet 'Shop. Hayi nje imali ahambe ngayo ekuncedeni abo basweleyo kodwa kwakhona indlela yokukwamkela isibhakabhaka-aphezulu amaxabiso aloo mzi Swiss!
Itikiti laseLyon ukuya eGeneva
I-Zurich ukuya eGeneva itikiti lesitimela
I-Paris ukuya eGeneva itikiti lesitimela
Bern ukuya eGeneva itikiti lesitimela
Ready ukuba ngubo entsha snazzy? Gcina imali yakho ukuba impahla kunye incwadi SaveATrain. Akukho imirhumo kufihlwe kwaye ufumana ukuze ncwadi lula! 😎
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-vintage-stores-europe/- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml kwaye bangatshintsha / nl ukuba / fr okanye / pl nangaphezulu iilwimi.